ဂျာမန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) မှတ်ပုံတင်ခြင်း & တင်ခဲ့သော
ဂျာမန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဖွဲ့စည်းခြင်း
တစ်ဦးကဂျာမန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ကိုတရားဝင် "Haftung beschränkter Gesellschaft MIT" ဟုခေါ်, နှင့်၎င်း၏အတိုကောက် "GmbH သည်" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအားလုံးဂျာမန်ကော်ပိုရေးရှင်း၏လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအနည်းငယ်ကန့်သတ်နှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေါင်းစပ်နှင့်ဖွဲ့စည်းရန်လွယ်ကူသည်။
အဆိုပါဂျာမန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဥပဒေတိုင်း LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, မှတ်ပုံတင်, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဖျက်သိမ်းအုပ်ချုပ်ရသောနိုဝင်ဘာလ 1, 2008 အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဝင်လေ၏။
နိုင်ငံခြားသားများဂျာမန် LLC အတွက်ရှယ်ယာ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
ဂျာမနီအလယ်ပိုင်းအနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်က, အရှင်, ယင်း၏အရာရှိတဦးကအမည် "ဂျာမဏီ၏ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံ" ဖြစ်ပါတယ်, ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဂျာမန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်:
• 100% နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှု: နိုင်ငံခြားသားများဂျာမန် LLC အတွက်ရှယ်ယာ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ရှယ်ယာရှင်များ liabilities ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကန့်သတ်ထားပါသည်။
• တစ်ဦးကနိမ့် Capital ကို Mini ကို LLC: အသေးစားကုမ္ပဏီများသည်သာမန်နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်၏ 50% နဲ့ Mini ကို LLC အဖြစ်ထွက်စတင်နိုင်ပါသည်။
• ရိုးရှင်းသောမှတ်ပုံတင်ခြင်း: နှစ်ခုသာစာရွက်စာတမ်းများတစ်သက်သေခံရှေ့နေများကတင်သွင်းနိုင်သည့်လိုအပ်သည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ / Manager က: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တမန်နေဂျာအတူတူပင်လူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည့်လိုအပ်သည်။
တိုင်း LLC ဂျာမနီမှာအခြားမည်သည့်ဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့နာမညျကိုဆင်တူမဖြစ်သည့်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုရွေးချယ်ရမည်။ တိုင်း LLC အမည်အတိုကောက် "GmbH သည်" နဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။
mini ကို LLC
တစ်ဦး (mini ကို) သေးငယ်တဲ့ LLC ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတစ်ခုရရှိနိုင် option တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့တစ်တွေ "Mini ကို GmbH သည်" (Unternehmergesellschaft UG, haftungsbeschränkt) ဟုခေါ်ကြသည်။ တစ်ဦးက Mini ကို LLC သီးခြား LLC သည်မဟုတ်, အစား, အပြည့်အဝငွေကြေးပေးသွင်းနှင့်အတူ 25,000 ယူရိုထက်လျော့နည်းနေတဲ့မြို့တော်နဲ့ LLC ။ ဒါကြောင့်သာ 1 ယူရိုသာမြို့တော်ရှယ်ယာအတူ Mini ကို LLC ဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ယင်း၏အပြည့်အဝမြို့တော်၏ကနဦးမရှိခြင်းတက်သည်ဖြစ်စေ, တစ်ဦး Mini ကို LLC မပြည့်စုံမှီတိုင်အောင်, ၎င်း၏နှစ်စဉ်အမြတ်အစွန်းများ 25,000% ဆက်ပြီးအားဖြင့် 25 ယူရို၏နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်စုပြုံရပါမည်။ ထိုအခါ Mini ကို LLC ကအနည်းဆုံး 25,000 ယူရိုရှယ်ယာမြို့တော်နှင့်အတူတစ်ဦးစံ LLC ဖြစ်လာသည်။
တစ်ဦး LLC ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း Uncomplicated ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတည်ထောင်သူရှယ်ယာရှင်များအသင်းဆောင်းပါးများနှင့်အတူဖွဲ့စည်းခြင်း၏အကျင့်ကို execute နှင့်သက်သေခံရှေ့နေရှေ့တော်၌လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
ဤရွေ့ကား LLC စာရွက်စာတမ်းများကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်မည် (Handelsregister) နဲ့တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ (Geschäftsführer) ၏အားလုံးတစ်ဦးသက်သေခံရှေ့နေရှေ့တော်၌ထိုကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်မည်လျှောက်လွှာပုံစံကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ မှတ်ပုံတင်ခံရပြီးနောက်, LLC တရားဝင် entity ဖြစ်လာသည်။ ထိုအခါ LLC ဒေသခံကုန်သွယ်ရေးရုံး (Ordnungsamt oder Gewerbe-) မှာမှတ်ပုံတင်ထားရမယ်။
တစ်ဦး LLC များအတွက်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry ကိုအတူတစ်ခုကိုဖြည့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်သည်လက်ရှိတွင် 400 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဖက်ဒရယ်ပြန်တမ်း (Bundesanzeiger) တွင် entry ကိုနှင့်ထုတ်ဝေများအတွက်သက်သေခံရှေ့နေနှင့်ခရိုင်တရားရုံးအဘို့အအခကြေးငွေရှိပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောန့်အသတ်ဖော်ပြလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်မည်နှင့်အတူတင်သွင်းနေကြသည်အခါရှယ်ယာရှင်များ၏လီမိတက်တာဝန်ယူမှုကိုသာထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံတင်ပို့ရန်မတိုင်မီကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း LLC သည်အားဖြင့်ကောက်ယူလျှင်, ထိုရှယ်ယာရှင်များအပေါငျးတို့သကုမ္ပဏီမြှုတ်ဆိုဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခံထိုက်ပေဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦး LLC အတွက်ရှယ်ယာရှင်များ၏တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာမြို့တော်မှကန့်သတ်သည်။ ဘယ်တစ်ဦးတည်းကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆိုလိုသည်က၎င်း၏အကြွေးမှကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ဝတ္တရားဖြည့်ဆည်းဖို့ဝတ်ပြုရလိမ့်မည်။ LLC သည်အစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အခြားအခွင့်အရေးများကိုရယူအတွက်သီးခြားအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားကိုင်ပြီးတရားဝင် entity သည်နှင့်တစ်ဦးချင်းတရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပညတ်တရား၏တရားရုံးတွင်တရားစွဲခံရမည်။
ဘေးဖယ်အခြေခံအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များကနေလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ (GmbHG) တွင်ရှင်းပြအသင်း (Satzung) ၏ဆောင်းပါးများပုဂ္ဂလိကရှယ်ယာရှင်များနှင့်ထုတ်ပေးရှယ်ယာအတန်းအဖြစ်ရှယ်ယာရှင်များအဘို့အပိုဆောင်းအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သောအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များတတိယပါတီများမှမှအမွေကိုနှင့်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်း၏အခြားပုံစံများမှတဆင့်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအခွင့်အရေးများနှင့်တာဝန်များအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့် (ဈ) တို့ပါဝင်သည်; (ii) ကရှယ်ယာရှင်များ '' အစည်းအဝေး၏ခေါ်ဆိုမှုကိုတောင်းခံရန်, (iii) မဲပေးညာဘက်ခြင်းငှါ၎င်း, နှင့် (ဃ) စာအုပ်များနှင့်မှတ်တမ်းများစစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင်စီမံခန့်ခွဲဒါရိုက်တာများအနေဖြင့်အားလုံးကော်ပိုရေးရှင်းလုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရယူ။
ပို. အရေးကွီးတာဝန်များကိုပံ့ပိုးမှုများကို, ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်ရှယ်ယာမြို့တော်၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စေဖို့တာဝန်ပါဝင်သည်။
အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများ, တိုးချဲ့ရန်ကန့်သတ်ရန်, ဒါမှမဟုတ်မဖြစ်မနေဥပဒေများနှင့်ပဋိပက္ခထဲမှာမလျှင်ရှယ်ယာရှင်များ '' အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များကိုအပေါငျးတို့သဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်။
ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲတွေ့ကြုံလျှင်, ရှယ်ယာရှင်များဖြစ်စေရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုနေကြသည်: (ဈ) ကုမ္ပဏီမှ၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးပေးမှုများတိုးမြှင့်; (ii) ကုမ္ပဏီပျော်; သို့မဟုတ် (iii) ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုစတင်ဖို့အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်သည်။
တစ်ဦးက LLC စီမံခန့်ခွဲနှင့်၎င်း၏စီမံခန့်ခွဲဒါရိုက်တာများကကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။ အနည်းဆုံးမန်နေဂျာအဖြစ်ခန့်အပ်ထားရပါမည် (သူတစ်ဦးရှယ်ယာရှင်နိုင်ပါတယ်) နှင့်ဂျာမန်နေထိုင်သူဖြစ်မရှိပါ။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များသူတို့ကိုစည်းနှောင်လမ်းညွန်ထုတ်ပေးနေဖြင့်မန်နေဂျာထိန်းချုပ်လေ့ကျင့်ခန်း။
ဂျာမဏီ၏လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ (GmbHG) ပုံမှန်ရှယ်ယာရှင်အစည်းအဝေး (Gesellschafterversammlung) မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်သူကား, လုံးဝယင်း၏ရှယ်ယာရှင်များ၏လက်၌တစ်ဦး LLC ၏ထိန်းချုပ်မှုနေရာ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, command ကိုဒုတိယမန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ (များ) (Geschäftsführer) ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ (Aufsichtsrat) ကိုလည်းတိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲဒါရိုက်တာများကြီးကြပ်သည့် option ကိုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကဂျာမန် LLC နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်ငွေသားသို့မဟုတ်တူ၏ကြင်နာပံ့ပိုးမှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်သည့် 25,000 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။ နိမ့်ဆုံးမြို့တော် (50 ယူရို) ၏အနည်းဆုံး 12,500% ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုအမှန်တကယ်အလှူငွေအဖြစ်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်နှုန်းကို 15% ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, paid စုစုပေါင်းကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်၏ 5.5% ၏ "ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဝန်ပို" လည်းမရှိ။
ကုန်သွယ်ရေးင်ငွေပေါင်းအချို့မြူနီစီပယ်အပေါ်တစ်ဦး "ကုန်သွယ်ရေးခွန်" လွန်းတဲ့အခွန်ကောက်ခံလည်းရှိပါသည်။
ဒါဟာကုန်သွယ်ရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပုံမှန် LLC စုစုပေါင်းအခွန်အတွက် 30% န်းကျင်ပေးဆောင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။
နှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးများမလိုအပ်ပါ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးရှယ်ယာရှင်များအစည်းအရုံး၏ဆောင်းပါးများအားဖြင့်ခွင့်ပြုခဲ့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်မလိုဘဲစာသားကို form မှာအများစုမဲခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချမှတ်မရှိအစည်းအဝေးများလိုအပ်သည်။
ရှယ်ယာရှင်များ LLC သည်၏အဆုံးစွန်အာဏာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များ '' အစည်းအဝေးကုမ္ပဏီအတွက်မူဝါဒဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါငျးတို့သစေသည်။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်မည် (Handelsregister) သတင်းအချက်အလက်အများပြည်သူဖြစ်ပြီးမည်သူမဆိုကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်မည်အောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်:
ပိုင်ရှင် (များ) ၏အမည်•;
•ပိုင်ရှင်များနှင့် / သို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များ၏တာဝန်ဝတ္တရားန့်အသတ်,
ခရိုင်တရားရုံးများအခမဲ့အများပြည်သူပွင့်လင်းသောကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်မည်စီမံခန့်ခွဲ။ ထို့အပြင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်မည်ကိုလည်းဂျာမန်ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ် (Gemeinsames Registerportal der Länder) ၏ဘုံမှတ်ပုံတင်ပေါ်တယ်မှတဆင့်အွန်လိုင်းကြည့်ရှုရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီရဲ့အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးသောအဘို့ကိုလည်းဖက်ဒရယ်ပြန်တမ်း (Bundesanzeiger) ၏စီးပွားဖြစ်မှတ်ပုံတင်မှတဆင့်အွန်လိုင်းကာကှယျမှုရယူခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ဦး LLC ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သောပုံမှန်အချိန်ကာလနှစ်ခုမှသုံးပတ်ကဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဂျာမန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်: တစ်ခု option ကိုရိုးရှင်းမှတ်ပုံတင်နှင့်လည်းတစ်ဦးတည်းသောမန်နေဂျာဖြစ်နိုင်သူလိုအပ်တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်အဖြစ်နိုင်ငံခြားသားတွေ, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, အနိမ့်မြို့တော် mini ကို LLC အားဖြင့် 100% ပိုင်ဆိုင်မှု။